Xashiishada iyo Cilmi nafsiga • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Cannabis iyo maskaxiyan
Cannabis iyo maskaxiyan
albaabka Ties Inc. January 19 2022
maqaal by Ties Inc. January 19 2022
Isticmaalka xashiishadda waxay inta badan la xiriirtaa xanuunka dhimirka. Si kastaba ha ahaatee, ilaa xad intee le'eg ayay xashiishadda gacan ka geysataa schizophrenia oo dhab ahaantii keenta dhibaatooyin nafsi ah? Cadadkii ugu dambeeyay ee Janaayo 2022 ee Joornaalka Mareykanka ee cilmi nafsiga ayaa ka koobnaa xog cilmi baaris oo cusub.
Isku xirka xashiishadda ee cudurka dhimirka waxaa markii ugu horreysay xusay dhakhtarka dhimirka ee Scotland Thomas Clouston. Tani waxay dhacday ka dib booqasho magangelyo ah oo ku taal Qaahira 1896, halkaas oo 40 ka mid ah 253 bukaan loo aaneeyey waallida xashiishka. Tan iyo markaas waxbarashada si lagu qanci karo ayaa loo diiwaangeliyay xiriirka xashiishadda ee leh schizophrenia-sida cilmi nafsiga.
Xiriirka ka dhexeeya xashiishadda iyo schizophrenia
Tusaale ahaan, 1987kii 45.750 askar Iswidhish ah ayaa la waydiiyay isticmaalkooda daroogada. Kuwa isticmaalay xashiishadda in ka badan 50 jeer waxay lix jeer uga dhowaatay inuu ku dhaco shisoofrani 15 ka sano ee soo socda marka loo eego kuwa aan waligood isticmaalin. Falanqaynta daraasado badan oo cilmi baaris ah ayaa muujinaya celcelis ahaan laba laab natiijooyinka cilmi-nafsiga ee isticmaalayaasha xashiishadda caadiga ah iyo koror ku dhawaad ​​afar laab ah isticmaalayaasha ugu culus marka loo eego kuwa aan isticmaaleynin. Inkasta oo tani ay tahay kaliya urur ka dhexeeya xashiishadda iyo schizophrenia oo aan ahayn caddaynta sababta.
Kuwa isticmaala xashiishka awooda sare leh maalin kasta waxaa la ogaaday inay shan jeer uga dhow yihiin inay ku dhacaan xanuunada nafsiga ah marka loo eego kuwa aan isticmaalin. Daraasad Nederlaan ah ayaa ogaatay in kuwa doorbida xashiishadda leh maaddada CBD sare ay u badan tahay inay la kulmaan khibradaha nafsiyeed. Su'aashu waxay tahay in xashiishka uu keeno schizophrenia, haddii schizophrenics ay u badan tahay inay isticmaalaan xashiishadda, ama haddii cillad hidde-sidaha aasaasiga ah ay kordhiso khatarta isticmaalka xashiishadda iyo schizophrenia labadaba.
Daraasad Canadian ah ayaa bixisa caddayn dheeraad ah. Sahan sannadle ah oo lagu sameeyay 3.720 dhallinyaro ah ayaa muujisay xiriir cad oo ka dhexeeya inta jeer ee isticmaalka xashiishadda iyo calaamadaha nafsiyeed ee kordhay. Sidoo kale, daraasad lagu sameeyay 80.000 oo qof oo Maraykan ah ayaa muujisay in dadka qaba xashiishadda cannabis ay kordheen 2,5 laab tirada cudurrada dhimirka ee schizophrenic ee sida rasmiga ah loo ogaado.
Sababaha shisoofrani ee isticmaalka xashiishadda ayaa sidaas u muuqata in la soo bandhigay. Si kastaba ha ahaatee, way caddahay in xashiishadda ay saameyn badan ku leedahay horumarka ugu dambeeya ee schizophrenia marka loo eego lidkeeda. Si kastaba ha ahaatee, xashiishadda iyo alaabta THC waxaa si badbaado leh u isticmaali kara dadka waaweyn intooda badan. Ku raaxayso dhexdhexaad!
Akhri wax dheeraad ah psychologytoday.com (Source, EN)
Harvard waxay heshay habab cusub oo lagu ogaanayo xadgudubka xashiishadda iyo cilladaha.
Maalinta Caalamiga ah ee Hurdada: CBD ma...
3 Faa'iidooyin Cajiib Ah Oo CBD U Leedahay Finanka Maqaarka
New Zealand waxay noqon kartaa meesha ugu kulul ee xigta...